Dowlada oo sheegtay inay kordheen kiisaska Corona ee Soomaaliya -
Home News Dowlada oo sheegtay inay kordheen kiisaska Corona ee Soomaaliya
Dowlada oo sheegtay inay kordheen kiisaska Corona ee Soomaaliya
Wasiirka caafimaadka dawladda FS marwo Fawsiyo Abiikar Nuur ayaa sheegtay in kiisaska laga diiwaan galiyey dalka ee cudurka COVID-19 ay kordheen labadii bilood ee la soo dhaafay.
Waxa ay sheegtay in baaritaanadii laga sameeyey dalka 1-da ilaa 31-da January iyo 1-da ilaa 11-da February ee sanadkan lagu ogaaday in xaaladaha ay kordheen 52%, dhimashaduna ay siyaaday, taas oo muujinaysa sida uu u soo labakacleeyey cudurku.
Fawsiyo Abiikar Nuur ayaa xustay inay diyaariyeen qorshe bulshada lagula wadaagayo xogta xaalada cudurka, islamarkaana sare loo qaaday awoodda baaritaankiisa, iyadoo shirkado gaar loo leeyahay la siiyey ogolaanshaha baaritaanka cudurka, si adeegga bulshada loo fududeeyo, maadaama qofka dalka ka dhoofaya looga baahanyahay inuu haysto shahaadaha baaritaanka COVID-19.
Tallaalka cudurkan oo ay ansixisay hay’adda WHO ayey sheegtay Drs Fowsiyo inuu Soomaaliya soo gaarayo, kaas oo wax ka tari kara xakamayntiisa, iyadoo intaa ku dartay in baaritaan dheeraad ah lagu samaynayo nuuca cudurka oo Soomaaliya kiiskii ugu horreeyey laga diiwaan galiyey March 2020 in isbadal uu ku dhacay iyo in kale.
Previous articleMaraykanka oo ka hadlay weerar ka dhacay dalka Ciraaq
Next articleWasiirka Maaliyadda oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada Xoogga Dalka